‘विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण’ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
भारत : ३७४ मेगावाट
ट्रिपिङ : २० मेगावाट
माग : ११६८ मेगावाट
‘विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण’
साउन २७, २०७४ 2468 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
संसदको शुक्रबारको बैठकले विगत डेढ दशकदेखि विचाराधीन विद्युत नियमन आयोग ऐनको विधेयक पारित गरेको छ । अब विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । योसँगै आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्ने भएको छ ।
जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन र आयोग ऐनको मस्यौदा कोर्न सुरु गरिएको थियो । विद्युत ऐनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तर, आयोगको विधेयक पास भएकाले अब ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २०७३ चैत २५ गते विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । विद्युत विकासमा सहयोग तथा यस क्षेत्रको नियमन गर्ने गरी कानुन तयार गरिएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रका केही विश्लेषकले आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आयोगको विधयेक संसदबाट पारित भएपछि निजी उत्पादकहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, केही विज्ञ तथा विश्लेषकले आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ऊर्जा खबरले यस क्षेत्रका विज्ञसँग आयोग र यसको गठनबारे प्रतिक्रिया लिएको छ ।
शैलेन्द्र गुरागार्इं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)
‘आयोगले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरोस्’
निजी क्षेत्रको नियामक निकाय चाहियो भनेर निजी क्षेत्रले १६ वर्षदेखि प्रतिक्षा गरेको थियो । बल्ल आयो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । राज्यले यस्ता नीति नियम ल्याउँदा निजी क्षेत्रको भूमिका बिर्सिने गरेको छ । यो ऐनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । हामी आशावादी छौं, भविष्यमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
कृष्णप्रसाद दुलाल, जलस्रोत विज्ञ
‘उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका समस्या समाधान हुनेछ’
ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्ने कुनै निकाय थिएन । विधेयक पास भएर आएको छ । अब ऐन बन्नेछ । र, विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ । विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको नियमन गर्न आयोगको आवश्यकता थियो । जलविद्युत प्रवद्र्धकदेखि उपभोक्तासम्मका गुनासा समाधान आयोगले गर्नेछ । उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सबै खाले समस्याको सहजिकरण गरेर समाधान खोज्न सहज हुने अपेक्षा छ ।
आयोगको गठन प्रक्रिया नै मिलेन
आयोग पदाधिकारी गठन प्रक्रिया नै मिलेन । यसले प्रभावकारी काम गर्नै सक्दैन । आयोगको अध्यक्ष छनोट समितिको संयोजक सचिव तोकिएको छ । यसो हुँदा आयोग मन्त्रालयभन्दा तल रहन्छ । कुनै काम वा निर्णय लिँदा सचिवलाई सोध्नुपर्छ । कसरी यसले स्वतन्त्ररूपले काम गर्छ । भारतमा विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष छनोट गर्ने जिम्मा योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई दिइन्छ । निजी क्षेत्रले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो ।
‘आयोगले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नेछ’
सुवर्णदास श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, इपान
धेरै वर्षको प्रतिक्षापछि विद्युत नियमन आयोग ऐन आएको छ । यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । आजसम्म जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय नहुँदा धेरै कठिनाई थिए । अब सहज हुने देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत खरिद दर निर्धारण हुनेछ । निजी जलविद्युत कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा पनि आयोगले सहजिकरण गर्नेछ । ऊर्जा विकासमा नयाँ आयाम थपिएको महसुुस भएको छ । निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न पनि ऐनले अग्रसरता देखाउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
सामुदायिक संस्थाको चरम लापरवाही, एकै वर्षमा करेन्ट लागेर ४ को मृत्यु
आयल निगमको १५ दिनको घाटा २५ करोड
एक सातापछि त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन सुचारु, १२ मेगावाट उत्पादन
बजेट-कार्यक्रमविरुद्ध निर्णय गर्दै पश्चिम सेती फेरि चीनलाई दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले ४३ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने
पञ्चकन्या माईले मंगलबारबाट साधारण सेयर निष्कासन गर्ने
१० जलविद्युुत कम्पनीले ३ अर्ब २४ करोड बढीकाे सेयर जारी गर्दै
४ वर्षपछि पूरा भयो ढल्केबर सबस्टेसन,‘नो लोड’मा चार्ज
२५ वर्षपछि विद्युत विकास विभागले भाडाको घर छोड्यो, आफ्नै भवनबाट सेवा